Ndiani Anofanira Kushandisa Peptide Eye Serum? - Social News Daily
Chii chinonzi Sixth Sense uye tingaite sei ...
Peptide eye serum ine mabhenefiti akawanda, uye inofanirwa kutariswa seyakakura yehurongwa hwekuchengetedza ganda rako. Inopenya uye inoderedza kushanduka kwakatenderedza nzvimbo yeziso, inovandudza kutenderera, uye inosimbisa mashandiro emasero eganda. Izvo zvinongedzo muPeptide maziso ekirimu zvinobatsira zvakanyanya ganda uye zvinobatsira kuderedza pasi peziso puffiness uye wrinkles. Mapeptides mune izvi zvigadzirwa anoshanda kuderedza kutaridzika kweakasviba madenderedzwa, uye mazhinji acho anogona kunyange kaviri sekurapa kwemiromo.
Iyo Arcona PEPTIDE EYE SERUM ine yakaoma peptides iyo inobatsira kugadzirisa yakakuvadzwa tishu uye kuderedza puffiness. Inopa mvura uye inosimbisa nzvimbo yemeso yakapfava. Musanganiswa wepeptide unosanganisira Acetyl Tetrapeptide-5, inodzivirira ganda kubva mukukuvadzwa kwezvakatipoteredza uye inoderedza kuzvimba kwepasi peziso. Iyo patented Matrixyl TM ingredient inopesana nekuonda uye inovaka collagen. Nzvimbo yeziso inoguma yakatsetseka uye inovandudzwa.
Peptide eye serums inobatsirawo kuderedza zviratidzo zvekukwegura. Kirimu ichi chine musanganiswa wemapeptides uye ma antioxidants anopenya kushanduka uye kuderedza makwinya. Vanobatsira kuvandudza kusimba kweganda tishu uye kukurudzira hutano hweserura mabasa. Iko kuumbwa kunosanganisira Eyeliss TM uye Haloxyl TM peptides. Zvose izvi zvinoshandiswa zvinobatsira kurwisa zviratidzo zvekuchembera uye kuderedza kuputika pameso.
Arcona Peptide Eye Serum inzira inoshanda yekugadzirisa yemeso. Kirimu ichi chine musanganiswa wemapeptides anomutsa kutenderera kwe epidermis uye kurwisa mahara radicals. Iyo fomula inogona kubatsira kunatsiridza makwinya uye kuderedza kuzvimba uye kuumba patsva nzvimbo yeziso. Inotengeka pa$58 uye ine munhuwi unofadza uye unozorodza. Iyo serum inoshanda pakurapa mikwinya uye kushanduka kwemavara kwakatenderedza nzvimbo yeziso.
Haloxyl TM musanganiswa wemapeptide matatu. Inobatsira kusimbisa kusimba kwakapoteredza nzvimbo yeziso uye inobatsira kubviswa kwemavara eropa, izvo zvinogona kukonzera madenderedzwa erima uye kuzvimba. Argireline(r) is anti-wrinkle hexapeptide. Inoshanda nekuzorodza kushushikana kwechiso uye kuderedza kutaridzika kwemakwinya kumeso. Phytic Acid ndeye antioxidant inotorwa kubva mupunga uye gorosi. Inonatsiridza elasticity yeganda uye inoderedza zviratidzo zvekuchembera nekukurudzira collagen synthesis uye kudzvinyirira cutaneous pigmentation.
Peptides anozivikanwa neawo anti-wrinkle uye anti-kuzvimba mhedzisiro. Zvinokurudzirawo kusimba uye elasticity yeganda. Izvi zvinoreva kuti Peptide eye serum inogona kukubatsira kuderedza kutaridzika kwemakwinya uye kuzvimba pasi pemeso. Kuumbwa kwakanyatsogadzirwa kuchava nezvinhu izvi muzvigadzirwa zvayo. Ichavandudza kusimba kweganda, kuderedza kutaridzika kwemitsara yakanaka, uye kurwisa kuzvimba. Izvi zvinofanirwa kune yemhando yepamusoro cream.
Iyo Peptide iri muPeptide eye serum inobatsira kuderedza kuzvimba. Inovandudzawo elasticity yeganda uye inoderedza kutaridzika kwemakwinya uye mitsetse yakanaka. Iyo ine yakasarudzika collagen-yekuvaka yakaoma, Matrixyl (tm). Phytic acid inowedzera kushanduka kwemasero uye inoderedza kutaridzika kwemitsara yakanaka. Inobatsira kusimbisa matishu akakomberedza ziso. Zvigadzirwa zvePeptide zvakati wandei zvine zvinhu zvitatu izvi.
Peptides ine simba rekurwisa kuunyana. Kushandisa Peptide eye serum kunobatsira kuderedza kuunyana, kunatsiridza ganda, uye kuderedza kutaridzika kwetsoka dzegunguwo. Izvi zvinoshandiswa zvichaitawo kuti ganda rive rakapfava uye rakatsetseka. Vachavandudza kutaridzika kwemitsara yakanaka uye kuderedza kushushikana kwechiso. Iyo yakanakisa Peptide ziso serum ichave ine peptide kune yega yega mabhenefiti aya. Izvi zvichaita kuti ganda rako ritaridzike diki uye rive rine hutano rinotaridzika ganda.
Izvo zvinongedzo muPeptide eye serums inoshanda mukudzikisa mitsetse yakanaka uye wrinkles. Vanobatsira ganda kuchengetedza unyoro uye kupa plumping maitiro. Ganda rine hydrated rinogadzira akawanda uye akatsetseka masero eganda. Ivo zvakare vanovandudza elasticity uye kusimudzira chivara chinotaridzika chepwere. Iyo peptides inoshanda zvakanyanya mukudzikisa mitsetse yakanaka uye wrinkles, uku ichiwedzera kusimba kweganda uye kugadzirwa. Uyezve, ivo vanowedzera kugadzirwa kwe collagen uye elastin.